စိတ်ကြိုက်မြန်မြန်သောဖုန်းအားသွင်းစက်၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board > အမြန်ဖုန်းအားသွင်း
ယင်း၏ကြာရှည်ခံမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ တိုက်နယ်ဘုတ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူရမည်၊ အိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုနာရီပေါင်း ၇၂၀ အနှောင့်အယှက်မရှိပြုလုပ်ပြီး ၄ င်း၏သက်တမ်းကိုထပ်တလဲလဲစစ်ဆေးရမည်။ circuit board တွင်အလိုအလျှောက် fuse box၊ high-voltage သို့မဟုတ် short-circuit automatic protection များတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြီးတွင် circuit board ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်။
Charger powercircuit board
input ကို 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5a
3 A,9v -2A, 12 v 1.5 A ကို - ထုတ်လုပ်မှု5v 60 w
4 USB ခေါက် plug ကိုဒီဇိုင်း
charger power supply ထုတ်ကုန်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အသုံးချမှုများ
၁) အင်ဂျင်နီယာသည် power supply series ၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ circuit ၏ output voltage parameter သည် voltage ၏ထုတ်လွှတ်မှုအားကုန်ပစ္စည်း၏သက်တမ်းကိုမထိခိုက်စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သည်။
၂) ယင်း၏ကြာရှည်ခံမှုကိုစဉ်းစားကာတိုက်နယ်ဘုတ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ကို ၀ ယ်ရမည် ထောက်ပံ့ရေးအစိတ်အပိုင်းများ, အိုမင်းခြင်းနှင့်မပါဘဲ 720 နာရီကြာစမ်းသပ် ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထပ်တလဲလဲ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုကိုအတည်ပြုရန်။ ဆားကစ်ဘုတ်သည်ရှိရမည် automatic fuse box၊ high-voltage သို့မဟုတ် short-circuit automatic တို့တပ်ဆင်ထားသည် လုံခြုံမှုရှိပါက circuit board ကိုအလိုအလျောက်ပြန်ယူပါ။
၃) charger ကိုအီလက်ထရောနစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောမိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
3. Charger အသေးစိတ်ကို
Goodproducts၊ ပိုကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှု
ရွေးချယ်မှုနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း (တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဥရောပစသည်)
input ကို ဗို့အား
အိုင်စီ function ကိုအစီအစဉ်လုံလောက်သောပါဝါနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာ
Overcurrent၊ overload၊ overvoltage နှင့် short circuit protection တို့ဖြစ်သည်
Newelectronic အစိတ်အပိုင်းများ PC + ABS
Oneorder နှင့်ထောက်ခံမှု proofing
Delivery ကို 25 ရက်အတွင်း
၁) charger သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ 3C နှင့် CQC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်
၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်အထူးစမ်းသပ်စက်ကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါမည်။ ထုတ်ကုန်တိုင်း တစ်ခုအတွေ့အကြုံစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ကျပန်းစမ်းသပ်မှု။ ဒါကထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ပစ္စည်းကိရိယာများ။
တိုက်နယ်ဘုတ်ကိုထုံးစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသေတ္တာများ၊ တိုက်မိခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောဒဏ်ခံနိုင်သည့်အိတ်များနှင့် PE အိတ်စိုထိုင်းသောထုပ်ပိုးမှုများတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
၂) charger ကိုနမူနာများအတွက် ၇ ရက်အတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
၃။ ပုံနှိပ်တိုက်တွင်ရှိသောအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။
၄။ စိတ်တိုင်းကျညွှန်ကြားချက်များ -
အဖြစ် သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများကသင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည် ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ။ မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည် အရွယ်အစား။ ထောင်သောင်းချီသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုလိုအပ်သောအီလက်ထရွန်နစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ငါတို့ ထုတ်လုပ်မှုသည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများဖြစ်ပြီးသင့်အားတည်ငြိမ်စေသည် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်။ ရေရှည်တည်ထောင်ရန် ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူဖြစ်သောသမဝါယမဆက်ဆံရေး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဓိကအားဖြင့်စေ့စပ်သည် ထုံးစံ၌, ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမအဆင်သင့်လုပ်သူတွေကိုရှိပါတယ်။ ဒီမှာအပေါ်ပုံများ ဖောက်သည်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာယူခဲ့သောအင်တာနက်အားလုံးသည်နမူနာများဖြစ်သည်။
၁။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း - ကြိုတင်ပေးငွေ ၃၀%၊ တင်ပို့ပြီးနောက်ငွေလက်ကျန်။
၂) သင်္ဘော ချက်ချင်းအစက်အပြောက်အရေအတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံလျှင်။
၃။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်မသိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းပြခန်းသို့သွားပြီးနမူနာကိုကြည့်ပါ၊ အတည်ပြု၊ အမှာစာပါ၊ အရည်အသွေးမှာမှာနိုင်မည်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်နမူနာအကြားကွာခြားချက်ရှိပါကပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းတို့ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အရည်အသွေးကိုနမူနာအပေါ်အခြေခံသည်!
၈။ တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း။
The ကြိုတင်ရောင်းချမှုအစည်းအဝေးသည်ဖောက်သည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်တက်ကြွစွာဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်၊ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးစံနှုန်းများ၊ တယ်လီဖုန်းအမိန့်များနှင့်စာတိုက်အမိန့်များကိုလက်ခံပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့မှုအမျိုးမျိုးပေးသည် နှင့်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှု။
ဖောက်သည်များအားရောင်းအားတွင်စွမ်းဆောင်ရည်စျေးနှုန်းအချိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ပေးအပ်ခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်တက်ကြွစွာခြေရာခံခြင်း။
ရောင်းချပြီးနောက် - ၁။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်၏အရည်အသွေးပြproblemနာဖြစ်လျှင်မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားပြproblemနာကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးပါမည်။ ၂။ ထုတ်ကုန်ကိုလူ့အသိုက်အ to ့ကြောင့်သာမန်အားဖြင့်အသုံးမပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြproblemနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြပြီးထိုကဲ့သို့သောပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းပြပြီးဖောက်သည်၏ပြproblemနာအရဝယ်သူအားအခြားအဖြေများပေးသည်။
Hot Tags: အမြန်ဖုန်းအားသွင်း၊ စိတ်ကြိုက်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ